Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » चिसो बढेसँगै टन्सिलको समस्यामा हुनुहुन्छ ? पढ्नुस घरमै निको हुने विधि
चिसो बढेसँगै टन्सिलको समस्यामा हुनुहुन्छ ? पढ्नुस घरमै निको हुने विधि
२०७७ माघ २५ गते अाईतबार ०८:३१
काठमाडौं: अन्य समयमा भन्दा जाडोमा टन्सिलको जोखिम बढी हुनेगरेको पाइएको छ । गलामा टन्सिल हुने समस्या पछिल्लो समय धेरै मानिसको साझा समस्या बनिरहेको छ । टन्सिल हुँदा गलाको दुवैतर्फ मासुमा गाँठो बन्नेगर्छ । गला सुन्निने हुँदा बेस्सरी...
काठमाडौं: अन्य समयमा भन्दा जाडोमा टन्सिलको जोखिम बढी हुनेगरेको पाइएको छ । गलामा टन्सिल हुने समस्या पछिल्लो समय धेरै मानिसको साझा समस्या बनिरहेको छ । टन्सिल हुँदा गलाको दुवैतर्फ मासुमा गाँठो बन्नेगर्छ । गला सुन्निने हुँदा बेस्सरी दुख्ने अनि बोल्नमा समस्या पैदा हुन्छ । खानाको स्वाद पनि लिन सकिदैन ।
टन्सिलको कारण: आयोडिनको कमी, मौसम परिवर्तन, चिसो खानेकुरा, गलत खानपान, संक्रमण वा ब्याक्टेरिया, धूलोधूवाँ, अमिलो खानेकुरा आदीले टन्सिलको जोमिखम बढाउछन् ।
मरिच र तुलसीको पात: मरिच र तुलसीको पातलाई उमालेर गाढा घोल बनाउनुस् । राति सुत्नुअघि दूधमा यसलाई हालेर पिउदा निदान मिल्छ । यो क्रमलाई केही दिनसम्म जारी राख्नुपर्छ ।
मह र दालचिनी: दालचिनीमा एन्टीब्याक्टेरियल गुण रहेको हुन्छ । महमा दालचिनीको धुलो मिसाएर दिनमा तीनचोटि खादा गलाको टन्सिल निको हुन्छ ।
बेसार, मरिच र बीरेनून: बेसार, बीरेनून र मरिचलाई तातोपानीमा हालेर उमालेको घोलले पनि टन्सिललाई निको बनाउछ । यो पानी निल्दा र दिनमा दुईचोटि गला सफा गर्दा टन्सिल ठिक हुन्छ ।
हर्बल चिया: ग्रीन टीमा ल्वाङ, अलैंची र दालचिनी मिसाएर पिउँदा गलामा जमेको ब्याक्टेरिया र कीटाणु मर्छन । अदुवा र मह हालेको चिया पिउदा पनि टन्सिलको निदान हुन्छ । भोजन गरेपछि सधैं दुईतीनवटा तुलसीका पातलाई सफा गरेर चपाउनुस् । यसले दुखाई हटाउनुका साथै किटानु मार्न मद्दत गर्छ ।
सचेत रहनुपर्ने कुराचिसो बढेसँगै टन्सिलको समस्यामा हुनुहुन्छ ? घरमै निको हुन निम्न बिधि अपनाउनुहोस्
टन्सिल हुँदा अमिलो, पीरो र चिसो खानेकुरा खानुहुँदैन । यस्तो खानपानले जोखिम बढाउछ । टन्सिल भएको समयमा तरकारीमा तेल र मसला धेरै प्रयोग गर्नुहुदैन । भुइँकटहर, केरा, सुन्तला, आरुबखडा, खरबुजा, मेवा र स्याउ जस्ता फलफूल खानुहुँदैन । यसले टन्सिलको जोखिम झनै बढाउछ । news source: missionkhabar.com
प्रकाशित मिति २५ माघ २०७७, आईतवार २०:३१